MR MRT: Hello - ဟယ်လို
Hello - ဟယ်လို
တုံသံ ကြားလို့မှ တုံသံပြန်မပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်
Keyငါးခုကို နှိပ်ပြီး "hello" ဆိုတာကိုမှ keyသုံးခုကို နှိပ်ပြီး "hi"ပြန်မလုပ်လိုက်ဘူးရင်။
မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ် တမင်သက်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ် addလုပ်တာကိုမှ confirm မလုပ်ဘူးဆိုရင်
Tagလုပ်တာကို likeမနှိပ်ရင် မmentလိုက်နိုင်ရင်
Postကို ဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ် postထဲက စာကြောင်းကို copyကူးထည့်ပြီး commentမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်
သားရေ . . .
တရုတ်စာနဲ့ ထိုင်းစာကိုတော့ မြင်လိုက်ရင် သိသားပဲ။ ဒါ တရုတ်စာ။ ဒါ ထိုင်းစာ။ ခွဲတတ်တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကတော့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ နည်းနည်းဆင်သလိုပဲ။ Facebookမှာ လာနှုတ်ဆက်တာ ကြုံဖူးတယ်။ “Halo”တဲ့။ “Hello”လို့ ပြောတာထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ရှာတာ ဒါမှမဟုတ် ပျက်ချော်ချော် ရေးလိုက်တာလို့ ထင်မိတာပေါ့။ မြန်မာတွေ “တိဝူး....”လို့ လုပ်ကြသလို နေမှာပေါ့။ ဘယ်ကလဲမေး။ အင်ဒိုနီးရှားကဆိုတာ သိတော့မှ http://translate.google.com.sg/သွားပြီး Helloကို အင်ဒိုနီးရှားဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ တရုတ် နဲ့ ထိုင်းကို ဘာသာပြန်ကြည့်သလိုပေါ့။ အဲဒီတော့မှ သိရတယ်။ ဟုတ်သားပဲ သူ့ အင်ဒိုနီးရှားစကားမှာကိုက "Halo"တဲ့။ Google Translatorသာ မမှားဘူး ဆိုရင်ပေါ့။
ကျန်တာတွေကတော့ ဘာစာတွေမှန်းမသိ။ “တုံ”ဆိုပြီး ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ များလာတော့ မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရတာတွေ ရှိလာတယ်။ များတာပေါ့။ မိတ်ဆွေစာရင်းထဲမှာ လူနှစ်ထောင်ကျော်နေပြီ။ ဘယ်ကဟာတွေမှန်းလဲ မသိ။ ဘာတွေမှန်းလည်း မသိ။ ရမ်းပြီး Addခဲ့တာတွေ Confirmလုပ်ခဲ့တာတွေပေါ့။ လူနှစ်ထောင်ကျော် ဆိုပေမယ့် လောက်လောက်လားလား သိတာက ပိုပိုမိုမိုတွက်မှ နှစ်ဆယ်နဲ့ ငါးဆယ်ကြားမှာပဲ ရှိမယ်။ ဒီထဲက ငယ်ပေါင်းတွေနဲ့ အပြင်မှာ မျက်နှာမြင်ဖူးတဲ့သူတွေကို Passportမစစ်ရသေးဘူး။
ရန်ကုန်မှာတုန်းက Facebook Accountဖွင့်ခဲ့ပြီး သိပ်မသုံးဖြစ်ခဲ့။ အင်တာနက် ရှားပါးလို့။ ဘယ်သူမှန်း ဘယ်ကမှန်း မသိရတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်တော့ ရခဲ့တယ်။ ဒီကျမှ အင်တာနက် ပေါတာနဲ့ ပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ Password မေ့နေပြီ။ ဒါပေမယ့် Gmail Accountကို နာမည်တစ်ခုထဲနဲ့ သုံးတာမို့ Password Recoveryလုပ်ရတာ လွယ်လွယ်လေး။ Gamil Accountတွေသာ အများကြီး ရှိခဲ့ရင် Facebook Accountကို ဘယ်Gmailနဲ့ ဖွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိလို့ Password Recoveryလုပ်ရတာ မလွယ်လောက်ဘူး။ Passwordပြန်ရလို့ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ ၀မ်းနည်းစရာ။ စာရင်းထဲမှာ မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး တစ်ယောက်ထဲ။ သူကလည်း offline။ ဒါနဲ့ addလုပ်ထားတဲ့သူတွေကို အကုန်confirmလုပ်လိုက်မှ မိတ်ဆွေစာရင်း နည်းနည်းစည်သွားတယ်။ စုစုပေါင်း ၂၀လောက်။ ဒါပေမယ့် နာမည်တွေကြည့်လိုက်တော့ ဘာလူမျိုးတွေမှန်းလည်း မသိ။ ဓာတ်ပုံတွေ ဖွင့်ကြည့်တော့လည်း ဘာတွေမှန်း မသိ။ မြန်မာလည်း တစ်ယောက်မှမပါ။ ဒါနဲ့ မြန်မာနာမည် ၂၀ကို addလိုက်ရော။ သိသိ မသိသိ လုပ်လိုက်တာပဲ။ ကျား ၁၀။ မ ၁၀။ ၁:၁။ မျှအောင်လို့။ မြန်မာနှစ်ဆယ်ထဲက သုံးယောက်က confirmလုပ်တယ်။ သုံးယောက်ထဲမှာ တစ်ယောက်က messageတစ်ခု ပို့လိုက်သေးတယ်။ မြန်မာပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လို ရေးတာ။ အတိအကျ မမှတ်မိတော့။ ဆိုလိုတာကတော့ “တပည့်တော်က သာသနာကို လေးလေးနက်နက် ကြည်ညိုသူပါ ဘုရား။ အရှင်ဘုရား addလုပ်ထားတာ တွေ့လိုက်ရတော့ Facebookလို Social Media Networkမှာ သံဃာတော်တွေ ပါသင့်သလားဆိုတာ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စဉ်းစားမိပါတယ် ဘုရား။ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားပြီးမှ အရှင်ဘုရားကို confirmလုပ်လိုက်ပါတယ် ဘုရား . . .”တဲ့။ နောက်လည်း သူနဲ့ တွေ့ဖြစ်ပါသေးတယ်။ သာသနာကို သူချစ်ပုံ သူကြည်ညိုလေးစားပုံ သူတန်ဖိုးထားပုံကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုရမှာပေါ့။ အပြင်မှာလည်း သာသနာကို မချင့်မရဲ ကြည်ညိုနေရသူတွေကို တွေ့ဖူးတာပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေ အချိုးမပြေတာတွေ့မိရင် ဘာမှလည်း မပြောဝံ့၊ ပြောလို့လည်း အရာထင်မှာ မဟုတ်လေတော့ အောင့်သက်သက် ဖြစ်နေကြသူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ နောက်မှာတော့ addမလုပ်ဖြစ်တော့။ ဒါတောင် Recommendလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ addဖြစ်သေးတယ်။ သူတို့က Addလုပ်တာကိုတော့ ငြင်းခဲခဲ့တယ်။ နောက်တော့ Addလုပ်တိုင်း Confirmမလုပ်ဖြစ်ပြန်တော့။ လာaddသမျှ Not Nowလုပ်နေပြန်ရင်လည်း အားနာစရာ။ ကြီးကျယ်ရာ ရောက်အုံးမယ်။
သူကတော့ အပြင်မှာ မသိရင် confirmမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ စင်္ကာပူ တရုတ်မတစ်ယောက် ရှိသေးတယ်။ နောက်မှ သူ ပြန်ပြောပြတာ။ Quality Control နေမှာပေါ့။။ သူ့ကိုကျတော့ မသိဘဲ confirmလုပ်မိလို့ သူနဲ့ သိလိုက်ရတာ။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ စာရင်းထဲမှာ အင်ဒိုနီးရှားက တရုတ်တွေ တော်တော်များများ ပါနေတယ်။ ရေစက်လား ဘာလား မသိပါဘူး။ တစ်ချို့ က တော်တော် ဖော်ရွေတယ်။ လေလား မသိပါဘူး။ လာခဲ့တဲ့။ သိတဲ့ကျောင်းရှိတယ်။ တည်းဖို့ လိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့။ အသစ်တစ်ခု ရလိုက်သေးတယ်။ "I'matemple activist"တဲ့။ Temple Activistလို့ အဲဒီကျမှ ကြားဖူးတာ။ တစ်ယောက်က လာရင်ကြိုပြောတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးတယ်။ ဟုတ်သလားသိချင်လို့ message ပို့ကြည့်တော့။ သူက ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ ၀ါဝါမြင်ရင် ကြည်ညိုတတ်သူ နေမှာပေါ့။
Facebookမှာ အသိစာရင်း ရှည်လာတဲ့အခါ သိသိမသိသိ "Hello"ဆိုလာရင် အနည်းဆုံး "Hi"တော့ ပြန်လုပ်မိတယ်။ "ဘုန်းဘုန်း"ဆိုရင် "ဗျ"လို့တော့ ထူးမိတာပဲ။ ဘုန်းကြီးတန်မယ့် လူသားဆန်မိတာ။ မှားတာလား နောက်တာလား မသိ။ "ဟေ့ အချစ်လေး"လို့ လာအော်တာလည်း ကြုံရသေးတယ်။ ဒါမျိုးတော့ ငြိမ်နေမှ။
Helloယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကြုံရတာက အွန်လိုင်းမှာသာ မဟုတ်။ အပြင်မှာ ပိုတောင် ပိုသေးတယ်။ Hello, Bhante. ဟိုင်း ရှိဖု။ မပြတ်ကြုံနေကြ။ လူချင်း မသိရင်တော့ ပြုံးပြပြီး သံစဉ် အနိမ့်အမြင့်လေးနဲ့ "ဟိုင်း...."လို့ ပြန်လုပ်လိုက်ရင် ပြီးသွားတာပဲ။ ရင်းနှီးလို့ အနားလာပြီး ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ရှိခိုးတဲ့သူ ဆိုရင်တော့ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် အလ္လာပ သလ္လာပနဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ဧည့်ဝတ်ပြုလိုက်ရတာပေါ့။
ဒီနေ့မနက်တော့ eBookတစ်ခု ဖတ်နေတုန်း တရုတ်မတစ်ယောက် ကျောင်းအောက် ၀င်လာတယ်။ အရိပ်မြင်လို့ စောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ လူစိမ်း။ နှုတ်ဆက်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ်နဲ့မှ မသိတာ။ သူ့ဟာသူ ဘုရားဖူးလာတာ လာပေါ့။ စာပြန်ဖတ်နေလိုက်တယ်။ အနားရောက်တော့ သူက "Hello . . ."တဲ့။ သံစဉ် အနိမ့်အမြင့်လေးနဲ့။ စာဖတ်နေရင်း သူကိုပြန်မကြည့်ပဲ "Hello . . ."ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ လူစိမ်းပဲ ဒီလောက်ဆို တော်ရောပေါ့။ သူကလည်း ၀တ္တရားအရ "Hello . . ."တာ။ အင်း . . . ကျောင်းလာတဲ့ ဘုရားဖူး ဧည့်သည်ကို ဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းသေးပါဘူးလေလို့ တွေးမိတာနဲ့ ပြုံးပြမလို့ သူ့ကို ကြည့်လိုက်လိုက်တော့ . . .။ မှတ်ကရော။ သူက ကိုယ့်ကို နှုတ်ဆက်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဟာသူ ဖုန်းလာလို့ ဖုန်းဖြေနေတာ။ "Hello . . ."တောင် ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ "Hello . . ."ကိုတော့ အပြုံးနဲ့ တုံ့ပြန်တယ်။ အဲဒီအပြုံးကမှ ကိုယ့်အတွက် တကယ့် "Hello . . ."။ သံစဉ် အနိမ့်အမြင့်လေးနဲ့။
Posted by Ashin Acara. at 11:50 PM